पेट्रोलियम पाइपलाइन अब मोतिहारीबाट
काठमाण्डौ । बहुचर्चित पेट्रोलियम पाइपलाइन अब मोतिहारीदेखि अमलेखगन्जसम्म बन्ने भएको छ । रेल मार्गले रक्सौलमा इन्धन भण्डारण गर्न कठिनाइ भएपछि मोतिहारीबाट बनाउन लागेको हो । मोतिहारीदेखि अमलेखगन्जसम्मको ६८.९६ किलोमिटर पाइपलाइन निर्माण क्षेत्र हो । यसअघि रक्सौलदेखि अमलेखगन्जसम्म ४१ किलोमिटर तय गरिएको थियो । यो खबर आजको नागरिकमा...
स्थानीय तहमा १६ हजार बढीलाई जागिरको अवसर, कहाँ कति ?
काठमाण्डौ । स्थानीय तहहरूमा १६ हजार १६ कर्मचारीको अभाव छ । कर्मचारी नहुँदा कतिपय स्थानीय तहको सेवा प्रवाह नै अवरुद्ध भएको छ । ठूलो संख्यामा कर्मचारी अभाव भएपछि स्थानीय विकास मन्त्रालयले व्यवस्थापन गर्न बुधबार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ । स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले ७ सय ४४ वटै स्थानीय...
प्रधानमन्त्रीको निर्देशन अवज्ञा, सिँचाईका ३७ कर्मचारी ईटलीमा
काठमाण्डौ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निर्देशन लत्याउँदै सिँचाइ मन्त्रालयका सचिवसहितको जम्बो टोली तालिम तथा अवलोकन भ्रमणका लागि ईटली पुगेको छ । ईटालीको टुसिया विश्वविद्यालयद्धारा आयोजित सस्टेनवल ईरिगेसन विथ ईमसस् िअन माउन्टेन ईरिगेसन सिस्टम विषयक १४ दिने तालिम तथा अवलोकन कार्यक्रममा सहभागी हुन एकै मन्त्रालयका ३७...
भदौ ८ गते प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण
नयाँ दिल्ली । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भदौ ८ गते भारत भ्रमण आउने भएका छन्। भारतमा उच्च तहमा भेटघाट हुने गरी मिति तय भएको भारतीय स्रोतले जनाएको छ। भ्रमणका बाँकी तालिना तथा एजेण्डा भने तय हुन बाँकी रहेको छ। प्रधानमन्त्री देउवा भ्रमणको लागि कुन दिन आउने त्यस बारे निधो भएको छैन्, श्रोतले जानकारी दिएको छ। भारतकालागि नेपाली...
काठमाण्डौ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पार्टी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक सोमबार नसकिएका कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसकेको भन्दै मंगलबार (आज) गर्ने जनाएका छन्। देउवाले सोमबार दाहाललाई फोन गरी मंगलबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने जानकारी गराएका हुन्। आइतबार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँगको छलफलमा देउवाले...
हिउँदमा फर्कदै लोडसेडिङ
काठमाण्डौ । आगामी हिउँदमा मुलुकमा लोडसेडिङ हुने सम्भावना बढेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लोडसेडिङ हटाउन अगाडि सारेका सबै काममा अवरोध भएपछि हिउँदमा लोडसेडिङको सम्भावना बढेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए । बिजुलीको किफायती प्रयोगका लागि कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम, २५ मेगावाटको...
काठमाण्डौ । हायात होटललाई सरकारी जग्गा भाडामा दिने सम्झौता सरकारी निर्णयविपरीत भएको फेला परेको छ । हायात होटललाई दिएको एक सय ४८ रोपनी जग्गा सेयरमा परिणत गरेर होटललाई हस्तान्तरण गरेपछि मात्रै भाडा सम्झौता समाप्त हुने गरी तारागाउँ विकास समिति र तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेड ''हायात'' बीच सम्झौता भएको पाइएको छ । तत्कालिन...
संकटमा सिन्धुपाल्चोक, नाकाबन्दीमा तातोपानी
तातोपानी, सिन्धुपाल्चोक । अरनिको राजमार्ग अन्तर्गत तातोपानी नाका जोड्ने लार्चास्थित भोटेकोसी पुल आइतबार रातिको पहिरोले बगाएपछि सीमाक्षेत्र नाकाबन्दीमा परेको छ । दक्षिणतर्फको पाङसेर्पु डाँडाको चट्टान फुटेर बीचभागमा थुप्रिएपछि पुल भोटेकोसीमा झरेको थियो। उक्त पुल चिनले २०३८ सालमा बनाएको हो । भूकम्प र भोटेकोसीको बाढीले जिर्ण...
ज्ञानेन्द्रको चिया बगानले ११ बर्षदेखि कर तिरेन
दमक । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको स्वामित्वमा रहेको भनिएको हिमालय महालक्ष्मी चिया बगानले ११ बर्षदेखि कर नबुझाएको दमक नगरपालिकाले जनाएको छ । नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत युवराज दाहालले आर्थिक बर्ष ०६२/६३ देखि बगानले कर नबुझाएको बताएका हुन् । उनका अनुसार एकीकृत सम्पत्ति कर अन्तर्गत बगानले हालसम्म तीन करोड ८१ लाख ४१ हजार दुई सय ८४...
अब महिलाका लागि छुट्टैं बैंक
काठमाण्डौ । अब नेपालमा पनि महिलाका लागि छुट्टैं बैंक स्थापना हुने भएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले विश्व बैंकअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आइएफसी)सँग सहकार्य गरेर महिलाका लागि छुट्टैं बैंक स्थापना गर्ने तयारी थालेको हो । यसका लागि आइएफसीसँग प्रारम्भिक सहमति भइसकेको महासंघ अध्यक्ष भवानी राणाले बताइन् । महिलामा...
प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणको तयारी सुरु
काठमाण्डौ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आसन्न भारत भ्रमण नेपाल-भारतबीच विगतमा भएका सहमति र सम्झौता कार्यान्वयन समीक्षामा केन्द्रित हुने भएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालय अधिकारीका अनुसार विगतमा भएका सन्धि-सम्झौताको कार्यान्वयन समीक्षा र द्विपक्षीय संयन्त्रलाई सक्रिय बनाउने विषयमा भ्रमणमा छलफल हुनेछ । देउवा अगस्ट तेस्रो साता भारत...
गाईभैँसीलाई पनि सुत्केरी भत्ता !
बेसीसहर । लमजुङमा गाईभैंसीलाई पनि सत्केरी भत्ता दिन थालिएको छ । पुश स्याहारका लागि प्रदान गरिएको यो सुत्केरी भत्तदाले किसानलाई खुसी बनाएको छ । जिल्ला पशु सेवा कार्यालय लमजुङले जिल्लाका ५० वटा गाईभैंसीलाई दुई हजार पाँच सय रुपियाँका दरले सुत्केरी भत्ता दिएको हो । आ.ब. २०७३, ७४ मा पहिलोपटक ५० वटा गाईभैंसीले यस्तो सुविधा पाएका हुन्...
फेरि ब्युँतियो समग्र मधेस एक प्रदेशको मुद्दा
काठमाण्डौ । मधेसवादी पार्टीले छाडिसकेको समग्र मधेस एक प्रदेशको मागलाई सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताको पहलमा व्युँताइने भएको छ । समग्र मधेस एक प्रदेशको मुद्दा व्युँताउन भन्दै माओवादी केन्द्रको भातृ संगठन राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका संयोजक तथा हेर्डक्वार्टर सदस्य मातृका यादवको सक्रियतामा ‘मधेसी भ्वाइस एसेम्बली’ गठन...
काठमाण्डौ । पश्चिम बंगाल सरकारले शनिबार रातिदेखि नेपाली भाषाको टीभी च्यानलको प्रसारणमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। सिलिगुडीको सेबोक रोडस्थित एबीएन टीभी नेटवर्ककको कार्यालयमा शनिबार राति साढे १ बजे प्रहरीले तालाबन्दी गरेको छ। इन्टरनेट सेवामा एक महिनाअघिदेखि नै प्रतिबन्ध छ। भारतको पहिलो नेपाली टीभी च्यानमाथि प्रतिबन्धपटि दार्जिलिङका...
जोर्डनसँग हुँदैछ श्रम सम्झौताको तयारी
काठमाण्डौ । नेपाली महिलाले रुचाएको गन्तव्य जोर्डनसँग श्रम सम्झौता गर्न श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले पहल थालेको छ । केही दिनअघिमात्र मन्त्रालय र जोर्डनका अधिकारीबीच श्रम सम्झौताका बुँदामा सहमति भैसकेको र चाँडै दुईपक्षीय श्रम सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । अबको एक महिना जतिमा श्रम सम्झौता गरिसक्ने योजना छ । यो खबर...